शब्दकोश: ‘सरकार-बनाऊँ’ आमहडतालका झल्काहरू
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, May 02, 2010
Dilip Acharya May 02, 2010
गज्जब छ, ठाडै सत्ताको लागि भनेर पनि आन्दोलन गरिदोँ रहेछ ! विना शरम विना लाज ।
अन्तिम फोटो दामि छ, अब राज यस्तैको होला सायद !
सूर्य/सिकारु May 03, 2010
मुखमा परेको गासलाई मिल्काएर फेरी त्यही गास खोज्न सडक तताउनेहरुको चर्तिकला अनौठो छ बा !
सचित्र प्रस्तुतिको लागि धन्यबाद धाइवा जी
न आक्रोश न खुसी । यस्तै दैनिकी बनेको मुलुकमा पाहुना भएर आम हड्ताल हेरें मैलेपनि । तर यसरी कथा टिप्दै हिंड्न भने सकिंन मैले । ढिलो हेरें तस्विरहरु तर देखेको जस्तै देखें ।